म्याद सकिएका सामान नराख्ने कुनै खाद्यान्न पसल देखिएनन् :अनुगमन समिति « Pen Nepal
म्याद सकिएका सामान नराख्ने कुनै खाद्यान्न पसल देखिएनन् :अनुगमन समिति
Published On : 22 September, 2020 12:09 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । आज आक्वा ककनी ब्राण्डका १८ वटा जार नष्ट गरिएको छ । महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नयाँ बजार खुशिँवु क्षेत्रमा गरेको अनुगमनका क्रममा बिनोद किराना पसलमा बेच्न राखिएका, थोत्रो भएर रङ्ग नै फेरिइसकेका, कुच्चिएका, लेवल मेटिएका, पानी भरेको मिति नभएका जार र पानी नष्ट गरेको हो । व्यापारी भन्दै थिए, हामीले कम्पनीलाई धेरै पटक भनेका हौं । कम्प्लेन छ सुनाएका हौं । तर के गर्नु टेर्दैनन् ।
यो दृश्य हेरिरहेका उपभोक्ता भन्दै थिए हो त । जारको पैसा त हामीले तिरेको हो नि । आफ्नो पैसा खर्च गरेर उनीहरुले खटाएका सामान चलाउने? भन्न मात्रै सकेका थिएनौ । आज तपाईहरुले ठीक गर्नुभयो । आज गरेर छोड्नु भयो भने भोलि उस्तै हुन्छ । उनीहरुको सुझाव थियो यसलाई नियमित गर्नुपर्छ ।
यसै गरी चितवन दाजुभाइ टे«डर्सबाट ४७ प्याकेट म्याङ्गो ट््याङ्, २७ प्याकेट अजिनामोटो र ४० थान स्टेफ्रि नामका स्यानिटरी प्याड नष्ट गरिएको छ । यी सामानमध्ये ट््याङ् र अजिनामोटोको उपभोग्य मिति मेटिएको थियो । भएको म्याद पनि अक्षर मेटिने थियो ।
त्यस क्षेत्रमा भएका किराना पसलहरुको अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रिएका सामान नहुने कुनै पसल थिएनन् । व्यापारीहरु आफैं भनिरहेका थिए । होलान् त्यस्तै १०÷१५ प्रतिशत म्याद सकिएका सामान । के गर्नु र? लकडाउन छ ।
कृषि बिभागको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा पशु सेवा बिभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभाग, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, नगर प्रहरीका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।